MAGRO BEHORIRIKA : FOTOANA HANEHOAN-KERY IZAO – MyDago.com aime Madagascar
Nitohy teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny mpomba ny Filoha Ravalomanana. Toy ny mahazatra dia nisy hatrany ny lahateny maro samihafa nataon’ny mpitarika. Ny mpikambana ao amin’ny CST Fanatera Longin avy any Androy dia niarahaba ny Filoha Zafy Albert, Ratsiraka ary ny filoha Ravalomanana, noho ny fetim-pirenena omaly. Amin’ny maha filoha voafidim-bahoaka hoy Longin, no niarahabana azy ireo. Niaraka nifety tamin’ny vahoaka teto ny tenako hoy izy satria telo taona nitolona teto foana ka tsy hanenenako izany. Adalan’ny sasany raha hampandroso ny firenena, kanefa manilikilika ny hafa. Rajoelina hoy Longin milaza fa tsy fotoanan’ny fanenjehana intsony izao. Ny zava-misy anefa dia mbola misy ny Malagasy henjehina, mbola migadra any am-ponja, tsy afaka maneho hevitra.Efa telo taona Rajoelina hoy izy no milaza fa hamaha krizy nefa tsy mahavita. Ny antony dia ianareo mihitsy no tsy mahay mamaha krizy. Nanao antso ho an’ny vahoaka ny tenany mba handray andraikitra manoloana ny fanaovan’ny fat tsinotsinona ny vahoaka sahirana. Nanao antso ho an’ny Filoha Ravalomanana ihany koa izy mba hiverina haingana eto Madagasikara. Ny mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita Ralaiseheno Guy Maxime kosa dia nilaza fa raha naneho hevitra mikasika ny fankalazana ny fetim-pirenena Rajoelina dia nanambara fa tokony hifamela sy hifanatona.Amiko hoy Guy dia mihevitra fa manana hery sy vola izy ka manao tsinotsinona ny vahoaka. Rehefa resy sy lavo dia miantsoantso izany fampihavanam-pirenena izany. Mandetika azy hoy Guy ny raharaham-pirenena ankehitriny. Efa resy tanteraka vao mahatsiaro. Nambarany fa tokony atao haingana ny fihaonana eo amin’ny Filoha Ravalomanana sy Rajoelina ary atao eto Madagasikara. Ny nataon’ny Filoha Ravalomanana nandritra izya telo taona izay hoy izy no naharesy an-dRajoelina. Fotoana i hanehoan-kery izao ary fanaovana ny adidiy ho an’ny tsirairay avy. Halavontsika tanteraka hoy ity olomboatendry ity, Rajoelina.
Fotoana fananganana fanjakana tena izy izao hoy Raveloson Constant
Auteur Solo Razafy*Publié le 27 juin 2012 27 juin 2012 Catégories Politique
25 réflexions sur « MAGRO BEHORIRIKA : FOTOANA HANEHOAN-KERY IZAO »
zanabeboty dit :
ela loatra e!mampiesona lava;mandohalika @rajoely vao misy fihaonana zany eo!efa niteny izy omaly fa tsisy antenaina zany resabe izany!anjaranareo ny mitalaho izao!
Tara loatra raha izao ianareo vao miteny hoe fotoana hanehoan-kery izao. Angaha mahatsiaro fa voadona amin’ny isan’ny olona tonga teny Mahamasina. To do or not to do, that is the question! Ny olona na amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana dia mampiseho hery foana fa tsy hoe rehefa mahita ny adversera manao vao hoe dony aho ranaotra. TARA eo ko! Efa tara mihintsy ka! Tsy manakivy aho fa izay ny zava-misy. Mahalasa saina marina ireto leaders-ny mouvance Ravalo ireto ko. Ry Mamy sy ry Hanitra, tsy mihetsika, tsy manao n’inona n’inona, tsy manana na dia singana stratégie iray aza. Tafa-petraka ko. Dia mbola manao erreur indray Ravalo miantehitra amin’ny olona tsy hanao zavatra. Mino mihintsy aho fa izay no tsy mampandeha ny tolona. R’izareo tsy mitolona fa mipetraka amin’ny fauteuils doux et bien-payants ko! Mampalahelo isika vahoaka. Ho atsy tsy mahavoa, ho aroa tsy alehany. Mila leaders vaovao, fa tsy miankina amin-dRavalo sy Rajoelina izany intsony. Dia iza anefa? Le vahoaka no atao ping-pong sisa hamenoana paosy. Ka na ireto vahoaka koa aza tsy mahalala izay tokony ataony ko, tsy tiako tsy tiako nefa hotroniko ihany. Rehefa tsy tianao dia ampisehoy hoe tsy tiako izao fitondrana izao amin’ny endriny rehetra. Tsy tompon’andraikitra amin’ny hoaviny mihintsy e. Efa voadona, efa any anaty lavaka, mbola tsy tonga saina, tsy mbola maka lesona ihany amin’ireto mpanao polifika maloto ireto. Isika Malagasy mahantra satria mahatanty fahantrana. Fehiny: samia manao izay mahasoa ny tenany, ny tokatranony. Avelao ny politichien hanao ny politikany any.
Azavao kely ilay hoe: »tsy miankina @ domelina sy dada ???? » inona no tianao ahatongavana???
Tonga dia tsory ny resaka fa aza mody ahodina, raha ny mpitarika no ahilikao tsy maninona fa
kosa raha i Dada??????hen !!!tsy mamely an!!miady isika an!!!enga anie ka tsy ho izay,fa ny anay andrinay foana iny
satria hatr@’izao aloha mbola tsy misy AHASOLO AZY EO FA MISOLELAKA @ renikely daholo koa aoka isika mba tsy
hifamahan-dalitra eto an!!na ianao momba an’i dada na domelina fa aza mody………….aleo tsy toizana sao tezitra ka tsy mety.
Zavatra ry SADC mihintsy no milalao ity raharaha ity fa tsy iza ,
efa voavidin’i renikely ireo dia mitagataga lava eo mba haniliana
ny riatra @’ dada, izao efa oviana izay mbola tsy hita hoe ahoana , izy no nampidi-kizo nampanao
iny SONIA iny kay,voatsipy ranon-kapa tany @ foza tany ry ilay vendrana isan dia izao isika no
mibata ny taolam-be tsy mitapaka.
dia niazakazaka koa nanao ilay sonia ny adala tsy hendry rehetra ,ohatry ny tsy mbola mahalala ny
laingan’i domelina efa misosa ho azy ohatra ny rano vaky iny???i dada moa dia mahatoky saka nefa
trondro ny laoka, hatao izao atsojay izao ba hiara haniliana an’i dada @’ ity DOMA ADALA DOMELINA
mpangalatra ity satria efa fantatry la frantsa fa efa aloham-bahoaka i domelina i dada moa dia efa loza
mananontanona azy ireo dia mitady irika mody hoe sady tsy dada no tsy domelina ÔDÔYĖ!!!!
28 juin 2012 à 3 h 23 min
Marina ny teninao Ranavalona, nefa matoa tonga amin’izao ny firenena dia tokony ho fantatrintsika fa misy antony ao izay tsy ho fantatsika fa làlana tsy maintsy izorana angamba raha ny eo ambony no ho banjinina dia Andriamanitra izany. Izay foana no lazaiko hoe : tsy maintsy mahatoky an’Andriamanitra isika rehetra.
Mangataka antsika rehetra, ary indrindra an’i ranavalona sy Raozy hihira an’io, rehefa amin’ny 9h00, 12h00 ary amin’ny 15h00, isan’andro !
Hanampy antsika amin’izay angamba i Jesoa sy ny Rainy, hanaisotra ny mpanongana sy ny forongony ! Mbola lavitra dia lavitra ny làlana ho diavina, ny tanjona !
28 juin 2012 à 8 h 58 min
Efa ela ihany izay hoe hampiasa hery zay ny forngon’i Valo fa dia mandamoaka daholo izay atao e! Mahery loatra ilay boay kely Filoha mahavita azy, ka resy hatrany ny zanak’i dada, ary tena KO mihitsy aza! Asehoy indray ny manaraka hanamontsananay azy e!
APPEL à l’intention des GTT-GENEVE et GTT IdF !!!
ET A TOUS LES GTT – ANTANANARIVO – ANTSIRABE – DIEGO – FIANAR -MAHAJANGA……………………………………….
.A MADAGASCAR comme A L’EXTERIEUR ……
28 juin 2012 à 10 h 55 min
Ho an’ i Ranavalona. Nametraka fanontaniana aho hoe: dia iza anefa? Niezaka ny nitady ny valiny aho alina tontolo, izao maraina fa toa tsy mahita.Tsy misy mahasolo an-dRavalo aloha hatreto raha « Homme d’Etat » malagasy. Ny zavatra tiako lazaina aminao dia izao, mamaky foana ny forum ao amin’ny tim-madagascar.org/Forum aho ary mahita ireo fanakianana betsaka miantefa any amin’ireo mpitarika. Niezaka ny tsy nino aho hoe ireo mpitarika no fototry ny tsy fahombiazana nefa rehefa nandinika tokoa aho ny momba ireo niditra système dia toa mahatsapa fa leaders inactifs ireo miteroterona ao amin’io fitondrana io. Tsy mahagaga raha tsy manana stratégie mihintsy hitondrana ny tolona.Mino aho fa raha hanao zavatra ireo mahavita fa kosa mialokaloka amin’ilay fijery hoe: mbola ankamantatra ny ho avy, tano ny azo fa sarotra ny mila. Mampalahelo ary tena mampalahelo. Tiako ho fantatrao kosa anefa fa misy olona leo satria mahatsapa ny fihetsik’ireo leaders. Anisany aho. Any Antsirabe ve ry zalahy no mitositosy manao 26 miaraka amin’ny foza iringiriny ko! Ny tena mpitolona idray no mampiseho amin’ny miaramila hoe :ity ny laissez-passer- nay mantsy ny sarin’ny dada, mahazo teny ratsy avy eo. Ny mpitarika mahazo podium. Ahoana ny fahitanao an’izany? Ilay vahoaka no ampatoriana amin’ny angolateny hoe « kely sisa, kely sisa, mahomby hatreto ny tolona » dia faranana amin’ny hoe « fotoana fanambarana hery izao », nefa ry zareo tsy mihetsika akory. Mihetsika ahoana ary hoy ianao? Betsaka ny azo atao, afaka mampiasa ny médias ry zareo e, afaka mangataka fanazavana amin’ny SADEC ry zareo hoe tsy hitanareo ve izao fanitsakitsahana ankitsy rano ny tondrozotra izao, médiateurs ianareo inona ny mésures raisinareo. Ity tsy misy action na iray aza. Dia hoe manaiky matoa tsy miteny. Ny ankilany ampiasainy daholo izay azo ampiasaina ny médias, ny jeneraly isany, ry Voninahitsy, ry Pety, ry ambasadaoro isany. Mandroso foana, mandroso hatrany. Farany io « echec et mat », marina moa. Tsy i dada no ratsy fa ny mpiara-dia aminy. Raha tsy mitandrina izany ny mpomba an-dRavalo dia ho lefy zato isan-jato ny tolona. Hevitro aloha izay e, mety tsy ho d’accord ianao nefa hajaiko izay fijerinao raha mifanipaka amin’izany. Tsarovy kosa anefa fa ny fijerinao amin’ny saina tsy miangatra (fa tsy amin’ny fo) dia mety hanampy amin’ny tolona, mety hampisaina ireo mpitarika. Misy olona leo any ho any. Na manaiky isika na tsy manaiky dia izay no izy. Ndeha akipintsika ny maso dia atao hoe mbola tsy kivy « mihintsy » ny vahoaka sasany.Inona ny hiseho? Mitohy amin’izao rythme izao ihany ny tolona, mihena an-dalana ny olona, mahazo laka izany ny foza. Lakile afa tsy mahavoa trano ve dia mbola terena foana fa hoe « SAO MBA… ». Fijerin’olo-tsotra izay e. Na izany na tsy izany aleo aloha mba andrasana ny vokatry ny fihaonan’izy mirahalahy mianaka. Dia ho hita eo ny tohiny.
A la bonne heure ! Mba misy olona tena sahy milaza ny ao am-pony !
Marina dia marina ny voalazanao ry hery, saingy mazàna mantsy dia izay sahy milazany marina, dia voapeka satria toa hoe mpanimba ny tolona !
Misy fanitsiana kely fotsiny ataoko amin’izay voalazanao, miala tsiny :
« Tsy i dada no ratsy fa ireo mpiara-dia aminy » ?
Hatry ny ela (2003) no efa hita ny porofo, fa ny metimety kokoa angamba dia ny hoe : »Tsy i dada no ratsy, fa ny malagasy no dombo sy tsy mahay mijery lavitra sy tia kely, ka ny omeo omeo ary androany androany ihany » !
Moa tsy toa izany ve ilay resaka 4L ? Afaka niteny hoe menaka sy vary koa anie izy ê !
Amin’izao fotoana dia misy, ary marobe ny malagasy tsy mihinam-bary in-telo isan’andro intsony ! Inona anefa no mba kiredin’ilay dondrona teny amin’ny tirezy mey ? Vary tapaky ny sotro aza ny an’ny sasany tsy mihiditra am-bava, dia voatery manendaka sy mamono olona amin’izao fotoana ! Ry lerony mtsy mitsahatra manodrana volamena sy boaderaozy !
Iza no tompon’andraikitra amin’izao faty olona isan’andro vaky izao ? Iza no tompon’andraikitra amin’ny tsy fisian’ny fandriampahalemana nandritry izay telo taona sy tapany izay, miampy ireo nataon’ilay domelina sorona teny Ambohitsirohitra sy ireo maty kila may, tamin’ny janoary 2009 ?
Firifiry ny isan’ny maty ? Ary azo ampidirina amin’izany ireo narary tsy afaka nitsabo tena noho ny tsy fisian’ny enti-manao !
Izao rahonan’ny vendrana amin’ny basy, tsy misy sahy mihetsika fa mivalan-drano amin’ny devà sy deriera daholo ! Sa mba ho tonga saina daholo amin’izay ?
Mazava fa misaotra anao ry Hery voalazanao daholo ary saika nampihetsika ny
tambaviko kely aza ny sasany fa tena MARINA , raha manaiky ianao dia tetika
daholo izao mba hanadinoan’ny olona an’i dada koa amiko vao maika aza izany no hifikirako aminy, ary raha izay
olona eo @ Magro ??na be na kely tsy any ny olana fa rehefa hilaina ireo tonga feno HIPOA ho azy eo foana fa
AZA MATAHOTRA, malahelo koa aho @ hataon’ireto mpitarika ary sy sasatra ny mimenomenona aho eto fa saingy!!
« misy miihainnooooooo……? »efa nilaza ry zareo fa hanova ny hetsika koa asa izay ho vokany na ahaomby na tsia.
Io efa mazava fa ao @’io ankolafy io mihintsy no misy ny sakana ary fata-poko izany e!!!hanosora-potaka an’i dada.
Izahay sy Raozy ihany no tsy tian’ialahy ry Kintana!!!
Ry jesosy o! izaho anie Katolika e!!!ny any JESOA, aiza ary ianao izany???
ranavalona, mambalombalona (tsy mivalombalona) ! raozy manambaka raozy !! MDR !!!!!!!!!!!!
Natao ve aloha ilay hira tamin’ny 12h00 ? Raha tsy nahita an’ilay hafatra, dia mba amin’ny 15h00 ; efa mitovy isika izao !!
Tsy hietsika intsony isika fa hivavaka fotsiny, dia hilamina ny tantara !
Ialahy kosa !!tsy midika fa tsy hietsika fa ilay vavaka no tena manampy tosika
fa devol no mifanehitra amintsika anie e!!he izato zavamisy mampiteny ny maona,
efa biby no miray ampitsanganana VORY OLONA IZANY( mangoro vitsika aho).
ranaval, Natao daholo hoy ianao ny tetika reetra hanadinoana ny dadanareo.
Valiny: TSia tompoko, Tsy ho adinon’ny Malagasy velively ny Namonoana ankitsirano ireo olona nitaky fahafahana, Tsy HO adino velively ny hatsembohan’ny Malagasy Nagalarin’io rangahy io, Ny Fanagadrana ireo olona reetra tsy nitovy hevitra taminy, Indrindra ny Ampihimamba sy fibodoana ny Fananan’olona eran’ny Faritra 22.
Tsy Hadino ry Ranaval fa aza matahotra ianao, Ianao ve izao dia manadino an’i Ben Laden, na i coutiti, na i Sombila?
Izany ny olona tena vraie mpomba an-dRaosy, mazava RAHERY le analyse nareo a! @ lafiny iray de tsy azo omentsiny ny mpitarika, fa io de otran’ny lamasinina io, rehefa ny lohany no mivarina an-kady de manaraka daholo ny zanany. Mihevitra mantsy nareo, fa tsy manana part de résponsabilité GOAVANA be dadanareo. Ny tena marina de tsy fahaizana politika, miainga avy @ cerveau ny mihitsy no tena marina. Tany aloha be tany ny tenanay, de nanolon-kevitra teto, fa tsy ny fiziriziriana, sy ny blocage lava, ny fiheveran-dRa8 fa na de lavitra aza izy, de voabaikony daholo, na ny politique extérieure malagasy, indrindra, ny momba ny famatsiambola, ary mamerina matetika moa izy, woe baikoko fotsiny de mivaha io famatsiambola io, aty amiko ny lakile, miresaka @ mpamatsy vola aho…sns. T@ireny aza, de sahiny mihitsy no niteny, rehefa nahazo sazy t@ OUA ny tsirairay tamin’ireo mpitondra, de mbola tsy afa-po Raosy fa sazio hatramin’ireo mpandraharaha vahiny mampiasa vola ao Mada ao, fa ireo no mbola mampitsangana an’io fitondrana io, de teo ny tenanay vao tena nahatsapa, fa noho ny alahelon-tseza, de sahin’ity rangahy ity ny manao takalon’aina ny vahoaka malagasy, ny Amerikana moa ireny de azony nobaikona @izay tiany, sady poulain n’ny Bekintana rahateo, tonga de nofoanan-dRaosy sy ny Bekintana ny AGOA de ireny ny vokatry ny fahapotehana asa teny @ zone franche ireny.
Efa lehibebe ihany ny taonanay ry Hery, teraka taona vitsivitsy taorian’ny fahaleovan-tena, efa nahatsiaro tena sy ado fony TSIRANANA, manampy ny alahelon’ireo ray aman-dreny ny belle époque n’io fitondrana io, zay nahavita ny lalana rehetra nisy teto Mada, ny hopitaly be isam-paritra, ny lalam-by, ny hamoran’ny fiainana , kanefa indrisy moa, mbola io eo MANANDAFINAREO, nanongana azy, nilaza fa tsy mbola mahaleo tena ny gasy, nalaza ny woe, mbola misy saribakolin’ny impérialiste, ovao teny gasy ny fampianarana, de ireny niafara t@ 13 May ireny. Ka aza miteniteny foana re, fa tsy azo hampitaina tamin’izany zay vitan-drainareo, fa tena efa mivavaka loatra @io rangahy io nareo. Ekena, be ny zava-bitany, fa be ihany koa ny hadalana, nataony, ary ny famonoany olona toy ireny, tsy azo asanda @izay zava-bitany na oviana na oviana, ary tsy ho afa-maina @izany izy, fa na atao woe mbola ho tafaverina eo aza, ka hanadio tena, de mbola ho ratrapper n’io crimes natao io foana, na iza résponsable, na i Andry na i Monja, de mbola handray ny valin’asany zay nandatsak’aina, de aiza no nihafaran’i Tsiranana(FSRS), aiza Ratsiraka ( jamba miporiporina sisa), natao inona ny vola be azon-dRatsiraka teo @ pouvoir 22 taona, de te hamely an-dRaosy izy teny Ivato woe io volabenao io, ary ny azy natao inona, toa tsy tafatombina an-tanindrazana fa mamarana ny andro sisa any an-tanin’olona, ka faty angamba vao aterina hody, ho lava velona ane ny Deba.
De minoa ahy marimarina, fa tsy maintsy toy izany no hiafaran’izay nanao ratsy sy nandatsak’ain’ny mpiray tanindrazana aminy, ary na de manana vola be zay azo t@ atsojay, fanaraoraotam-pahefana, favoritisme, empire Tiko, detournement 22 millions banque centrale, capitalisme trop libéral tena sauvage be, ny je suis sy mafy be moa manginy fotsiny, de tena marina ny an’i Rana sy Hery, fa tsisy otran-dRaosy iny raha mbola filoha gasy.
De tsy fahaizana politika no betsaka, mba nanoro ihany zahay, mba nanoro ihany ry Chissano, woe, aza maika hiverina handrombaka pouvoir, Ra8, fa modia ianao, tsy maintsy miantoka ny fanananao ny tetezamita, de tsy nisy nanakana anao mihitsy teo, raha tsy nilingilingy hiverina @ seza, fa nanaiky le woe, tsy mahazo mody raha tsy aorianan’ny apaisement, sy ny fifidianana filoha, ny olona izay ho lany aorian’izay, de miantoka ny fananao, azo natao tsara ny ni indemniser zay fanananao simba, azonao atao tsara ny mifanaraka @ny fianakavian’ireo maty novonoinao, satria tsy afaka ny hamerina ny maty ianao, fa mba au moins manao geste kely ho an’izy ireny, de tsy noraharahanao izany, de io ianao fa mitanty ny tsinin’ny rà sahady, sesintany tsy fidiny, matahotra ny higadra, tsy handry andro tsy handry alina raha hiverina an-tanindrazana, ny fitsaran’Andriamanitra zay nialokalofanao natao fitaovana moa manginy fotsiny.Azonao antoka ve fa na io zanakao tsy zazasary Tojo io, de ho tafandrimandry, sy afaka miriaria malalaka noho ny crimes vitanao?
Tsy aleo ve nanaraka izany, nampiroboroboina indray ny orinasa Tiko, naka hery indray, nanohitra nanao opposition matanjaka, tahaka ny nandrodananao an-dRatsiraka, teo @ sezany ny hanaovanao izay nandimby ny toeranao teo, de fantatrao tsara, fa na enao aza mbola manana problema be @ miaramila, mbetika ianao manenjika azy, mbetika enao mila vonjy aminy, de ny olona woa mahay politika, fa tsy vitan’ny wawawa ny fihazonana pouvoir, fa mila hery, de ny tafika no anton’izany voalohany, de jereo ny ataon’ny Zandrinay, fa milay izy, milay izy na de tapaka tanteraka aza ny famatsiam-bola ka mbola tonga eto aloha mandrak’androany.
Tsy fahaizana politika no betsaka, ary modian’ireto fanina, fa noho ny fividianana avion air force 1,2 zay saika ampiasaina hanaovana aferan’ny Tiko, tsy nazava t@ mpamatsy vola, na hanaovana fitateram-bahoaka, na atao inona t@ 2008, de teo defa nanapaka ny vivre an’i Mada ny mpamatsy vola, de hoy zahay sy ry Rana sy ry hery woe, milay be woa Raosy iny.
Nihevitra mantsy ny CI, fa nisy tsy rariny iny fanonganam-panjakana iny, de tena nomba an-dRaosy izy tany am-boalohany, ary nanome telo taona hijerena tsara ny an-daniny sy ny an-kilany izy, mijery koa izy ny opinion n’ny gasy, ary vao maika nijabaka nanao iny 26 juin parallèle iny, ary zay tonga tao Mahamasina akory de tsy woe mpomba an-dRajoelina avokoa, fa fetin’ny fahaleovantena sy ny tafika io ka na ny masoivoho vahiny aza manotrona, fa azonareo mouv Raosy atao tsara ny maneho tsy fitiavana an-dRajoelina, fa ny fanaovanareo tsinontsinona ny tafika, de vidianareo lafo hatrany, de impiry moa zahay no miteny woe, mba iza loatra re no manolotsaina an’ity Raosy ity e!
De aza omena tsiny ny mpitarika, fa tompon’andraikitra voalohany t@ echec ny dadanareo, amin’ny tsy fahaizana politika, ary tsy fiteny ireny woe, hainareo ny miditra, nahoana no tsy hainareo ny miala, de hitanao ary izy ireo, fa tena hainy tokoa ny niditra, fa tsy afa-miala na miala tapany, ianao lavitra azy rahateo, de tsisy zavatra ho vitanao eo Raosy ô! ary akatony tanteraka itony sit itony, fa fandaniana andro sy fandrevirevena no betsaka sisa e! Tsy ampy koa ny solaitra, ka mpitery ronono nasondrotry ny vintana no lasa any an-tampony, de ny mahatsara azy miverina mitery ronono ihany.
Be aminareo ane no miteny, an’eritreriny any, fa be marina ny tenin’i Be, fa ataon’ny sasany mamay eto, zay sahy manoratra izany, ary ireny tolokevitray ireny, defa tokony nampiharina ela, fa trop tard e! lasa Zandrinay, de mihanahanà mijery lamasinina mandalo eo!!! ka sagnagna manomboka hatrany @n-Draosy aloha, de avy eo Lalao sy ny zanany efatra, de ireto lieutenants mpitarika, zay vao ny zazasary rehetra, de aleo handihizan’i BE sy Tanora ary Dénise eto!
Ireo ndray RAbe vôpl sy Denise mpivaro-pika fa manao ny hataony Imasom-bahoaka toa an’Sônada sy Ra-Pauline mpivady samy adala teo Analakely
Vita Tompoko Kintana! izay vao hitako fa hay nobahanan’ny sasany io aloako io dia tsy hitako ilay hira.
Sady manganoano aho no mihira ilay hira, ilay feoana harmonie efa migadridroka be mampahatsiahy
ahy ilay izahay mivavaka any ambanivohitra rehefa fetin’n y zanaka ampielezana, dadabeanay @’io no mitendry ilay
harmonie efa migadriiiiidroka bue ery.
Tena loza oah !fa izaho aza tsy nino????fa dia hidiran-doza inona loatra ity fireneko ry Ray o????
Ireo razam-be izay natahotra mafy izany Zanahary izany na dia tsy fantany akory aza hoe: IZA???
nefa izao @ andron’ity domelina dia mahasahy maniratsira ny HASINA maha-Gasy ny Gasy fotsiny izao ireto foza olom-
boahozina, tsy faka taranaka ireto.
Ho an’ny KintanaMananDrambo, diso tsipelina: tsy i dada no ratsy fa ireo mpitarika sasany. Miala tsiny.
Zany Raverb refa tsy ampy solaitra, manao boloky sisa, de tsisy afa-tsy reo ndray Rabe vôpla…sns! mbola aiza ny hahazo e!
Mba inoy ihany kintana ry Rana, fa Andriamanitra woa, tsy homba na oviana na oviana, ny mpandatsa-drà! andriamanitra hafa angamba ny anareo!!!
Nisy antony woa ry kintana izao krizy izao raha , fa raha nisy ny famatsiam-bola, azoko antoka fa raha ny vitan-dRaosy dimy taona, iray taona fotsiny no hanaovan’i Zandry azy.
Na izany na tsy izany, raisiny ny andraikitra, il tient la barre, de amiko, efa rendrika ela Mada raha ny ankivy ara-toekarena nanafaizana azy, saingy be heri-po lay filoha jeune kely, defa manomboka misokatra ny mason’izao tontolo izao. Hifanatrika ireo ato ho ato, de jereo eo, zay tena homme d’état, na ny fihetsika, na ny fiadian-kevitra, ary karazana fitsana farany handraisana fanapahan-kevitra. Fa ny sur aloha, de Zandry tsy hiala na oviana na oviana @ ligne iray woe, tsy maintsy mamaly ny crimes nataony Raosy. Tezitra @iny, de miala eo @ fivoriana, de Zandry efa nanomana vola hanaovana fifidianana iray @ity Nov ity, na hanao na tsy hanao ny CI. De hikorapaka daholo ny rehetra avy eo satria, Zandry raha vao niteny woe, tsy maintsy atao ny FDR, de nikorapaka ny SADEC, tsy maintsy soniavina ny FDR de nikorapaka avokoa, tongava ny experts ny NU momba ny amnistie, de tonga nafonja be hatramin’ny an’ny SADEC, de ala-neninina farany @n-dRaosy io, fa na de ny Rainiboto aza ity, niverina ihany, ny tafika Frantsay ireto manamafy ny fiaraha-miasany @n’ny gasy, nanatrika teny Mahamasina avokoa ireo masoivoho vahiny, afa tsy Bekintana mpomba an-dRaosy, de mba misaina ry sagnagna, fa misy dikany mafonja avokoa izany rehetra izany, ary nareo ireo ve tsy mahatsapa, fa tena miha-maivana tanteraka, ary raha za t@ place nareo ry Verbeeck, efa nisitrika aho fa nareo zao no tena mitanjaka. Tsy menatra ve nareo, taratasy inona zay fitarainana nalefa tatsy sy taroa, filaharana inona zay tsy natao teo alohana masoivoho vahiny izay, de iza no namaly? Toa nfiran’ny olona fotsiny?
Ny nampisy an’ity fifampidinihan’ny roa tonta ity aza ane, tsy hevitra nivoaka t@ SADEC, fa RAOSY NO NANORATRA TANY MBA HANGATAKA HIHAONA AMIN’NY ZANDRY E! de mba nohenoin’ny olona, fa ala-nenina io,ary fantatr’olona ny résultat n’io, de miroso @izay ny olona fa manala baraka médiateurs koa zay négociation mitarazoka elabe izay, satria hataon’ny olona ho tsy capables eo ry zareo, de faranany @izay io, de ampiharina ny andininy 16,18,20 ao @ FDR, fa raha io fihaonana farany no tadiavin-dRaosy hanafoanana ny andininy 45, de hanonofy izy, fa eo no hiazonan’i Zandry azy @ tendakeliny, satria teo @io nahatraingo anareo t@ nanasoniavana an’iny satria sagnagna be, ka raha mihatra @n-dRaosy io, raha miverina any Mada izy ka migadra, de opay in-jato, na in-1000 Rabe, ampio le woe Rabe vôpla, na fôpla, na Rabehevitra…sns, de opay lavabe, raha hahita réaction @ CI nareo zazasary ireo, satria io le woe, ny SADEC tsy mijabaka @ raharaham-pitsaran’ny pays iray souverain, fa mahaleo tena tanteraka izy, de mbola nanamafy iny iny loi d’amnistie novalavolain’ireo experts vahiny sy gasy ary ny minisitry ny fitsarana, ary nofidiana tao @ assemblée zay tsy nisy nanakiana na de tsy nandray anjara tao aza ny mouv Raosy, ary io no mankarary an-doha anareo mafy ankehitriny, fa tsy handaitra intsony ity, mokondoha sy ankivy ary fibodoana otran’ny zazakely ataonareo ity, ka nampihitsoka ny raharaham-pirenena, fa manomboka mivaha tsikelikely io, ny antony de fantatr’izao tontolo izao @izay ny tena be vinany, ary tena antony lehibe, de ny courage politikan’i Zandry, sy ny détermination de mendrika azy @izay ny hitondra an’i Mada tsisy sakantsakana sy ankivy noho ny fisedrana nahazo azy izay, ka be de be eto nareo, no manome tsiny vahoaka, woe, efa ho faty hanaovan-dRajoelina azy, nefa mbola mipaingapainga. Vahoaka io tsy adala, fantany ny ratsy loha sy ity adinareo hampaharitra ny krizy ity, hitany fa manao zay fara heriny i Andry, saingy tsy sasatra ianareo manipy hoditr’akondro aminy, de tohanany, ka aleony mihafy anio, mba hisian’ny ho avy mamiratra, de tsy ampahafirin’ny vahoaka an’alinkisa teny Mahamasina nareo eto, sy ny 21OO tany Antsirabe. De mba mahiratra raha toroana, ary mba mandinika rehefa mihinan-kininina lava! OK?????
Tsisy tsiny ê ! Mandeha ho azy ny ratsan-tànana indraidray !!
Hay ve mpitendry « harmonium » ny dadaben-dranavalona taloha ê ? Izaho manana anankiray hitendreko « Tia zaza », tsy mila manao « vélo d’appartement » intsony !
Tsy maintsy mivavaka foana é ! indrindra ho an’ireo tanora é ! ary indrindra ho antsika rehetra é – Ny asa tsy maintsy araham-bavaka. Ary ho aiza moa isika raha tsy mivavaka ?
29 juin 2012 à 16 h 12 min
Dia elah amin’ireo mba avoakan’lah reo ve leitsy ry rabe vôpl no hilaza ahy ho tsy ampy solaitra zay ihany mou no specialitén’ny foza » zà mahay fa ny teo alou no katsaka tsaramaso voanjobory » zay le oe tsianjerim-mpoza ary i rabe vôpl mihanjaka indray no midohaka!!! ary foza dia zay ihany tsy afaka mihoatra an’zay satria zay no maha atidoham-poza azy!!! fantatry ny vahoaka tokoa ny politika hampidirana ny mpajananaka eto ary hitan’ny masoko tety Ivato tokoa ny Miaramila frantsay fa raha izany rehetra izany ho hilazana fa favy ny DJ n’lah dia ny aina no matezà fa samy eto tsika ahita ny tohiny fa resaka Miaramila mitam-basy tohanan’ny frantsay no maha-eo an’io DJ io!!!
Précédent Article précédent : Magro Behoririka : nankalaza ny fetin’ny 26 Jona tamim-pilaminana
Suivant Article suivant : TSY AZO EKENA NY FANJANAHANA ATAON’NY FRANTSAY